China Factory cryo wholesale izinqubo okumelwe umshini Ukwakha futhi Factory | I-GGLT
Umshini wokugoqa we-cryo wholesale
Indlela entsha, engeyona eyeyokuhlasela yokwehlisa izindawo ezihlanganisiwe zomzimba ngobumnene nangempumelelo okuholela ekwehlisweni okubonakalayo, okuthuthukile kwamafutha ezindaweni eziphathwayo. Njengoba i-triglyceride emafutheni izoguqulwa iqiniswe emazingeni okushisa athile aphansi, isebenzisa ubuchwepheshe bokupholisa ukukhetha ngokukhetha ama-fat bulges futhi iqede amaseli amafutha ngenqubo ehamba kancane engalimazi izicubu ezizungezile, ukunciphisa amafutha angafuneki. isiqeshana sendawo silawula izinga lokushisa kwesikhumba futhi sivikele izakhiwo ezinhle zesikhumba, siqaphele imiphumela esheshayo yokuvuselela umzimba ngenkathi iqinisa isikhumba!
I-1.Cavitation: iqonde ngqo kusendlalelo esinamafutha, dlidliza ngokushesha i-cellulite ejulile, ikhiqize i-vacuum cavitation engenakubalwa, ishaye ngamandla amaseli anamafutha, awavumele akhiqize ukuqhekeka kwangaphakathi, ancibilike abe yi-fatty acid yamahhala.
I-2.Multi-polar RF: isebenzisa ubuchwepheshe bokuphathelene nokwakha i-matrix yamandla esebenza kahle futhi eqinile. Le matrix yamandla aminyene ingena ezingxenyeni eziningi zesikhumba, iyishise kusuka ngaphakathi iye ngaphandle. Ukungena okuphelele kwesikhumba kuqinisekisa ukusebenza komtholampilo okuthuthukile futhi kuveze imiphumela ebonakalayo.
ILipo laser: isebenzisa ubuchwepheshe bamuva be-laser obubandayo ukunciphisa ibhande namanoni amaningi cishe kuzo zonke izindawo zomzimba ngaphandle kokuhlinzwa, isikhathi sokuphumula noma ububomvu. Ukwelashwa okujwayelekile okhalweni okwemizuzu engama-40 kunganciphisa umuntu ngo-½ kuye ku-¾ ngamasentimitha ngenkathi inqubo elandelwayo ephelele yezokwelapha eziyisishiyagalombili ivame ukuholela ekulahlekelweni ngamasentimitha amaningi.
I-Cryolipolysis ikhonjiswa ngokukhethekile ekwehliseni amafutha endawo: Abazongenela ukhetho yilabo abafuna ukunciphisa amadiphozi asendaweni, ngokwesibonelo esiswini, ezinhlangothini, eqolo, okhalweni, emathangeni, ezingalweni eziphezulu njll. Lezi zivame ukuba yizindawo ezinenkani kakhulu ekudleni nokuzivocavoca umzimba. Yize abantu abaningi belapheka, akusona isisombululo sokulahleka kwesisindo jikelele. Siphakamisa ukuthi umuntu ofanelekayo angaphakathi noma eduze kwabantu abathandekayo besisindo somzimba (BMI) kuleli qembu bazobona imiphumela emihle kakhulu. Kepha, futhi kungaba yisikhuthazo esihle esengeziwe kulabo abaqala ushintsho endleleni yokuphila.
Umkhiqizo I-GGLT Amandla alinganisiwe AC 110 ~ 220V
Isisindo sengqikithi 48KG Kukalwe amandla 800W
Isisindo esikhulu 56KG Usayizi womkhiqizo / W * D * H 62 * 46 * 170cm
Imvamisa 50 ~ 60Hz Usayizi womkhiqizo / L * H * W 106 * 73 * 65cm
Ukulawula isibamboindlela Thinta I-cryo enkuluisibambo usayizi: 1 # 195 * 85mm2 # 210 * 90mm
Phatha isikrini 4.5 I-cryo encaneisibambo usayizi: 1 # 140 * 70mm2 # 155 * 80mm
Isibamboimpahla I-Sillicon 3 # 165 * 90mm
Isibamboizinga lokushisa -10 ℃ / 45 ℃ Isilevu esiphindwe kabiliusayizi wesibambo 80 * 40mm
Ingcindeziokukhiphayo 0.08MPa Imvamisa yekhanda le-Cavitation 40KHz
Indlela yesiqandisi Umjikelezo wamanzi Amandla e-Laser 100mw / pc
Ubuso be-RF 3MHz Laserubude bamaza 650nm
Imvamisa ye-RF 5MHz Inani lamalambu e-laser 72PCS
Q1: Kuthiwani ngesikhathi sokulethwa nemodi yokuhamba?
I-A1: Ngemuva kokuthola inkokhelo izimpahla zingalethwa kungakapheli izinsuku eziyi-3-5 zokusebenza. Ongakukhetha ukuvezwa kwe-DHL, i-FedEx, i-TNT, i-UPS, noma i-forwarder yokuthumela nge-air noma ulwandle kuwo wonke umhlaba.
I-Q2: Kungenzeka yini ukuthi ikhasimende lifake futhi lisebenzise umshini okokuqala?
I-A2: Siphakela ukufakwa nokusebenza kwevidiyo nencwajana yomsebenzisi yereferensi yakho. Futhi singakunikeza ukuqeqeshwa okuku-inthanethi amahora angama-24.
I-Q3: Ngemuva kwensizakalo yokuthengisa noma isekela lobuchwepheshe?
I-A3: Sineqembu lobuchwepheshe elisekela ithimba lezinsizakalo zakho ezifika ngesikhathi ngokuxhumana ngocingo noma ngengxoxo eku-inthanethi.
I-Q4: Singaphrinta i-Logo yami kumikhiqizo?
A4: Yebo, singakwazi. I-OEM ne-ODM zamukelekile lapha.
Langaphambilini i-cryotherapy cellulite ukususwa kwe-cryolipolysis body slimming machine okokuqandisa amafutha
Olandelayo: 2021 H2 & O2 micro dermabrasion sprayer oksijini jet ikhasi umshini
Imishini Yomzimba WeCavitation
Cavitation izinqubo okumelwe Ubuhle Machine
Umzimba Womzimba Womzimba Omncane
Umshini We-Rf Vacuum Roller Velashape Slimming Machine
Umshini Wokusebenza Wobuhle Obulula
Umshini We-Cavitation Wokunciphisa umzimba
Intengo Yomshini Wokuncipha
Umshini Wokunciphisa umzimba Velashape
Okunciphisayo Velashape 3machine
Umshini We-Ultrasonic Cavitation Slimming
Umshini Umzimba Umshini Omncane
Umshini Rf izinqubo okumelwe Machine
Umshini Roller izinqubo okumelwe Machine
Umshini izinqubo okumelwe Ubuhle Machine
Umshini Velashape izinqubo okumelwe Umshini
IVela Shape Slimming Machine
Umshini we-Velashape 3 Slimming
Ukuncipha Komzimba Womshini WeVelashape
Umshini Wokuncipha weVelashape
IVelashape Slimming Machine Bulkbuy
Ukwakhiwa kabusha komzimba womshini we-360 CryoLipolysis
I-Cryolipolysis Machine Yokunciphisa Isisindo 360 Cryo ...
Ukubaza okupholile ama-4 Kusingatha Umshini wokulahleka kwamafutha
Cellulite Ukususwa Umzimba izinqubo okumelwe 360 ​​Cryolipolys ...
Umzimba opholile wokuqopha umshini we-cavitation system ube ...
umshini we-cryotherapy ophathekayo wokunciphisa umzimba